एक अध्ययनले देखियो, ‘सित्तैमा खाना पाइने लोभमा महिला डेटिङ जान्छन् – erupse.com
एक अध्ययनले देखियो, ‘सित्तैमा खाना पाइने लोभमा महिला डेटिङ जान्छन्
एजेन्सी – आम रुपमा महिलाहरु पुरुषसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् । कुनै पनि पुरुषसँग नजिक हुँदै गरेकी महिलाको चाहना रोमान्स वा लामो सम्बन्ध स्थापित गर्ने नै हुन्छ । तर, अध्ययनले के देखाएको छ भने सबै महिला रोमान्स वा जीवन साथीको रुपमा मात्रै पुरुषलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने हुँदैन ।
३३ प्रतिशत महिलाबाट स्वीकार – अनलाइन अध्ययनका क्रममा ३३ प्रतिशत महिलाहरुले खाना खानकै लागि डेटमा जाने गरेको स्वीकार गरेका छन् । यसमा ६७ प्रतिशत महिलाले भने यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । औसतमा ३४ वर्ष उमेर पुगेका ३५७ जना महिलामा यो सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
कतिपटक यस्तो डेटमा जान्छन् ? – महिलाहरुलाई खाना खाने मात्रै उद्देश्यले डेट जानु भएको छ ? भनेर सोधिएको थियो । यस क्रममा गएकी छु भन्नेहरुलाई कतिपटक जानु भएको छ भनेर पनि सोधिएको थियो । यसको जवाफमा रेटिङमार्फत उनीहरुको उत्तर खोजिएको थियो ।